Canadian Xpress Abriil 2021 Tartan Bille ah
Gegada Diyaaradaha ee Donegal waxay ku taal 2 nm koonfur-galbeed koonfurta-galbeed ee Bunbeg ee Carrickfinn, waa magaalo ku taal The Rosses, oo ah degmo ku taal waqooyiga-galbeed County Donegal, Ireland. Gegada diyaaraduhu waxay ku taal xeebta waqooyi-galbeed ee gobolka. qiyaastii 15 daqiiqo oo baabuur ah oo laga raaco Dungloe iyo Gweedore iyo 45 daqiiqo oo laga bilaabo Letterkenny. Waxaa si caan ah looga yaqaan gudaha Degmada Donegal sida garoonka diyaaradaha Carrickfinn. Sababtoo ah gaaska ballaaran ee aagga, duulimaadyada aan la qorsheyn ee duulimaadyada helikabtarrada ayaa isku xira rakibaadaha badda ee badan iyo garoonka diyaaradaha. Eastern Airways waxay ku shaqeysaa adeeg kireysi ah Aberdeen ujeedkan.
Ilaa bartamihii 1980-yadii, dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan wuxuu ahaa xarig cows ah. Tan waxaa lagu beddelay dhabbaha adag ee dhabbaha oo leh dhismayaal ku meel gaar ah. Gegada diyaaraduhu waxay shaqadeeda bilawday sanadkii 1986 waxaana lagu horumariyey dhaqaale iyo caawimaad ay ka heleen Dawlada Ireland, maalgashadayaal gaar loo leeyahay, Golaha Degaanka ee Donegal, Sanduuqa Caalamiga ah ee Ireland, iyo Sanduuqa Horumarinta Gobollada Yurub. Sagaashamaadkii 1990-kii waxaa lagu kordhiyay dhabaha diyaaraduhu gaadhaan illaa 1,500 m (4,900 ft) waxaana lagu soo kordhiyay dhisme cusub oo Terminal ah oo wata qalab casri ah oo loogu talagalay hagidda iyo qalabka.
Ujeeddadaadu waa inaad ka soo duusho West Knock (EIKN) una tagto Donegal (EIDL) wixii Canadian Xpress ah freeware ama payware Twin Engine Prop ama Turbo Prop diyaarad waxaad leedahay darajada aad ku duuli karto.
Ku soo biir Canadian Xpress maanta si aad uga qayb gasho maadaama ay jiraan abaalmarino waaweyn oo lagu guuleysto oo ay ka mid yihiin:
Saacadaha Duullimaadka Lacagta
Abaalmarinta Canshuurta Bilaha ee Canadian Xpress
Loolanka Bilaha ee Abriil 2021 wuxuu u furan yahay dhammaan duuliyeyaasha Canadian Xpress laga bilaabo Abriil 1st illaa Abriil 29th, 2021.
"Duuli Ficil Meelkasta"
* Canadian Xpress waxay aqbashaa 50% ee VATSIM, IVAO ama saacadaha kale ee diyaaradda duulimaadka ah oo aan xad lahayn.
Category: Wararka kale